Uganda: ” horumarkii ay sameysay AMISOM halis ayuu ku jiraa siduu Farmaajo & Khayre Hoggaanka u qabteen? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Uganda: ” horumarkii ay sameysay AMISOM halis ayuu ku jiraa siduu Farmaajo...
Uganda: ” horumarkii ay sameysay AMISOM halis ayuu ku jiraa siduu Farmaajo & Khayre Hoggaanka u qabteen?
Wasiirka arrimaha dibadda Dalka Uganda Sam Kutesa ayaa sheegay in horumarkii ay sameysay AMISOM 11kii Sano ee la soo dhaafay uu hadda halis ku jiro kaddib markii ay billaabatay qorshaha dhimista Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga.
Wasiirrada arrimaha dibadda iyo Difaaca ee waddamada ku jira Howlgalka AMISOM ayaa waxaa ay ka digeen fulinta qaraarka Qaramada Midoobey ee soo baxay bishii August ee Sanadkii hore,kaas oo fararay in Ciidanka AMISOM si tartiib tariib ah ay Amniga ugu wareejiyaan Ciidanka Soomaaliya islamarkaana tartiib tartiib uga baxaan dalka.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasiirrada arrimaha dibadda iyo difaaca waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa sheegay in haddii qorsha bixitaanka AMISOM la sii wado ay taas micnaheeda tahay in la howlgalka uu fashil ku dhowyahay.
Wasiirku waxaa uu ku baaqay gargaar kordhin iyo isku xirnaan dheeraad ah oo ay beesha Caalamka la garab istaagto AMISOM si uu howgalka u guuleysto.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaan AMISOM waa midka ugu waqtiga dheer howlgallada AU-da ka waddo Afrika,waxaana 7da Bishan March uu jirsanayaa sanadkiisii 11aad.
Dhinaca kale war murtiyeedkii ka soo baxay shirkii Madaxda ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee ka dhacay Kampala ayaa lagu sheegay in qaraarkii golaha amaanka ee Qaramada Midoobey uu yahay mid dib u dhac u keenaya howlgalka loona baahanyahay in laga laabto.
Qaraarkaas waxaa uu farayay in December 2017 ay Soomaaliya ka baxaan 1,000 Askari taas oo dhaqan gashay iyada oo Bisha May ee soo socota ee sanadkan uu qorshuhu yahay in ay baxaan 1,000 Askari oo kale.